Linux မှာ Chrome သုံးလို့ ရပြီ... — MYSTERY ZILLION
Linux မှာ Chrome သုံးလို့ ရပြီ...
March 2009 edited March 2009 in Ubuntu
လင်းနစ်အတွက် google chrome ရပါပြီ...
Ubuntu မှာ သုံးချင်ရင်တော့...
လို့ ရေးပြီး အင်စရော လုပ်လိုက်ရင် ရပါပြီ။
ထုံးစံအတိုင်း နက်ချိတ်ရမှာပေါ့ဗျာ... :P
ubuntu repo ထဲမှာတင်ရတယ်ဆိုတော့ မဆိုးဘူးပေါ့
ကျနော်တော့ Debian repo မှာတော့ မရသေးဘူးထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် Debian မှာ သွင်းမယ်ဆိုရင်လဲ ubuntu repo သွင်းပြီး install လုပ်လို့ရမယ်ထင်တယ် ဒါမှမဟုတ် source ကနေလဲ install လုပ်လို့ရမယ်ထင်တယ် .. ကျနော် google's chrome မသုံးလို့ မစမ်းကြည့်တော့ပါဘူး ..
စကားမစပ် .. ကိုရဲမာန် command မှာ -get လိုနေတယ် .. :
အဲဒီလို အဲဒီလို ...
နင်တို့ ဟာကြီးကလည်း သုံးလို့ရအောင် Hack ထားတာတွေမလား။
Google ကတော့ အခုထိ Chrome ကို Linux ဗာရှင်း ချမပေးသေးဘူး။ ဒီမနက်လေးတင် ကြည့်လိုက်သေးတယ်။ မေးလိပ်စာပေးထားပါ။ ထွက်ရင် မေးပို့ပေးမယ်လို့ပြောတယ်။
သိချင်တာက အခု Chrome ကြီးက Google က linux အတွက် release လုပ်ပေးလိုက်တာလား။ ပြန် Hack ထားတာလား ဟင်
ကြည့်ရတာ Ubuntu က release လုပ်ပေးတာလားမသိဘူး... ဘာပဲပြောပြော crossover chrome ထက်စာရင်တော့ ကောင်းမှာ.. laptop ပြန်ရမှပဲ စမ်းကြည့်တော့မယ်..
ဟက်စရာလိုဘူးလေ... Chrome က အိုးပန်းကြီးလေ....
အခုဟာက Google ကရေးပေးတာတော့ မဟုတ်ဘူး။
ဒီမှာ Source တွေ...
အော် . . . အခုမှ ဇာတ်ရည်လည်ပြီဗျ။
ဒီလို ဒီလို . . .
Chrome သည် Chromium ဆီမှ Source Code တွေ ယူပြီး built ထားတာပါတဲ့။ ဒါဆို Chromium ဆိုတာက ဘာလဲ။
ကိုရဲမာန် ပြောထားတာ Linux မှာ သုံးလို့ရတယ်ဆိုတာ Chromium ပါ။ Google ရဲ့ Chrome တိုက်ရိုက်ကြီးမဟုတ်သေးပါဘူး။ Google က Chrome ကို အခုချိန်အထိ Linux ဗာရှင်း တိုက်ရိုက် မချပေးသေးပါဘူး။
Google Chrome ကို Linux အပေါ်မှာ သုံးချင်သူများ Chromium ကို သုံးနိုင်ပါပြီ။
မထူးဘူးလေ။ သူတို့နှစ်ခုက ကုလားကြီးနဲ့ အရာကြီး၊ ညီအစ်ကိုတွေပဲကိုး။